Manome antoka ny fitaovana sy ny asa izahay. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra azontsika. Ao anaty warranty na tsia dia kolontsain'ny orinasa iarahantsika ny famahana sy ny famahana ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ireo entana. Express matetika amin'ny fomba haingana indrindra fa koa lafo indrindra. Ny seran-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny tahan'ny entana afaka manome anao fotsiny raha fantatsika ny antsipirian'ny habetsahan'ny lanjany, ny lanjany sy ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.